Ny fakàm-panahy sy ny famonjena avy amin'Andriamanitra (Tentation et secours divin)
Ny fakàm-panahy sy ny famonjena avy amin’Andriamanitra
1 Fakàm-panahy (*) roa karazana
1.1 Ny fakàm-panahy ivelany
1.1.1 Ny fanenjehana
1.1.2 Ny fitsapana
1.1.3 Ireo zavatra mety hahatonga ny fakàm-panahy
1.1.4 Ny fakàm-panahy anaty (*)
1.2 Ny fanampiana omen’Andriamanitra
1.2.1 Amin’ny fakàm-panahy ivelany
1.2.2 Amin’ireo fakàm-panahy anaty
2 Ny filàn’ny maso
2.1 Ny zavatra ivelany manintona ny maso
2.2 Misarika ny mason’olona hijery ny tena
3 Ny filàn’ny nofo
3.1 Ireo filàn’ny nofo mivaona
3.2 Ny fanaranam-po amin’ny fihinanana sy ny fisotroana
3.3 Ny fanampiana omen’Andriamanitra
4 Ny rehaka amin’izao fiainana izao
4.1 Ny fanafana omen’Andriamanitra
5 Ireo fakàm-panahy ivelany
5.1 Ny fanoherana
5.2 Ny ahiahy
5.3 Ny fakàm-panahy ara-tsaina
5.4 Ny fizahan-toetra
6 Ny famonjen’Andriamanitra
6.1 Amin’ny fakàm-panahy ivelany
6.2 Amin’ny fakàm-panahy anaty
(*) Io voambolana avy amin’ny teny grika io dia midika, arakaraky ny zavatra resahina, ho: fizahan-toetra, fakàm-panahy, zava-tsarotra iainana
(*) Nohazoninay — mba hanamaivan-javatra — ilay fomba fiteny ampiasain’ny sasany hoe “fakàm-panahy anaty”. “Raha ny tena marina, dia misy ny fitsiriritana alohan’ny fampirisihana hanota; ny fakàm-panahy dia manolotra zavatra, izay hironan’ilay toetra taloha voasarika, satria efa vonona ho amin’izany izy. Noho izany, ny fitsiriritana no mifanojo amin’ny fakàm-panahy; izy no mitarika ny ota tanterahana noho ny herin’ny fakàm-panahy”
Ny filàn’ny nofo dia avy ao anaty, araka ny voalazan’ny Tompo Jesoa: “Izay mivoaka avy ao amin’ny olona, dia izany no mahaloto azy. Fa avy ao anatin’ny olona, dia avy ao am-pony, no ivoahan’ny sain-dratsy, dia ny fijangajangana…” (Marka 7. 20-21). Miditra an-tsehatra izy rehefa tsy voafehy ny faniriana voajanahary (*) indrindra fa amin’ireto lafiny roa ireto, dia ny fijangajangana sy ny fihinanana sy fisotroana be loatra, ny “fahatendan-kanina”.
(*) Ireo faniriana ireo (ny saimbatana hanao firaisana, ny hanoanana, ny hetaheta, sns…) dia toetra araka ny tokony ho izy. Nefa inona moa ny antony hanomezana fahafaham-po azy ireo? Ny olombelona dia voary feno fanirina, tsara na ratsy arakaraky ny zavatra iantefany.